यस्तो गाउँ जहाँ छोरीमात्रै जन्मिन्छन |
यस्तो गाउँ जहाँ छोरीमात्रै जन्मिन्छन
प्रकाशित मिति :2019-08-04 14:25:00
सुन्दैमा अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने । के छोरा वा छोरी जन्मिने भन्ने कुरा पनि ठाउँले फरक पार्छ र ? सायद पार्दो रहेछ कि । त्यहीँ भएर युरोपको एउटा गाउँमा सधैं छोरी मात्रै जन्मिने गरेका छन् । उक्त गाउँमा पछिल्लो ९ वर्षयता छोराको जन्म भएको छैन ।
उक्त गाउँमा पछिल्लो पटक सन् २०१० मा एक दम्पत्तिले छोरा जन्माएका थिए । त्यसपछि गाउँमा जन्मिएका सबै बच्चा छोरी नै रहेका छन् । ९ वर्षअघि छोरा जन्माएका ती दम्पत्तिहरु पनि गाउँ छाडेर अन्यत्र गएर बसोबास गरेका छन् ।
गाउँका दम्पत्तिहरुमा केवल छोरीको मात्र जन्म हुने यो विचित्र घटनालाई लिएर विज्ञहरु पनि अचम्मित छन् । छोरा जन्मनु किन दुर्लभ बन्यो ? भन्ने विषयमा अनुसन्धानसमेत गर्न थालिएको छ । पोल्याण्डको वार्सास्थित एक विश्वविद्यालयले यो गाउँमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । एजेन्सी